Day In The Life Help & Support Management Wynee
စီမံကိန်း မန်နေဂျာတစ်ဦးအဖြစ် တစ်နေ့တာ
သင့်အနေဖြင့် အကျိုးအမြတ် မမျှော်မှန်းတဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရန်၊ အစိုးရထံမှာ အမှုထမ်းရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားပါသလား။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဟာ ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအသီးသီမှာ အရေးပါလှတဲ့အတွက် သင့် အင်တာဗျူးနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်စေရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွေကို ခဏတာမျှော်ကြည့်ခွင့်ရနိုင်မယ့်“နေ့စဉ်ဘဝထဲမှ တစ်နေ့တာ” ဆိုတဲ့ စီးရီးကို Wynee က စီစဉ်ထားပါသည်။ Waynee အနေနဲ့ အာရှဖောင်ဒေးရှင်း(ရန်ကုန်) မှ အကြီးတန်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Floor Verbeek ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲက တစ်နေ့တာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
စီမံကိန်းမန်နေဂျာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အများပြည်သူကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ် မမျှော်မှန်းသည့် ပရဟိတကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ တူညီသည့်အချက်မှာ- ၎င်းတို့အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အစိုးရဌာန၊ အလှူရှင်၊ သို့မဟုတ် အခြား စိတ်ပါဝင်စားသည့် အစုအဖွဲ့ တို့ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်း/ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းများကို မိမိတို့ကိုယ်စားပြုထားသော အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်များ သဘောတူ အတည်ပြုထားသည့် အချိန်အကန့်အသတ်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ အရည်အသွေး၊ စိတ်တိုင်းကျမှုတို့နှင့် စသည် အချက်များအတိုင်း ကိုက်ညီမှုရရှိစေရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာအနေဖြင့် စီမံကိန်း၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်များတွင် တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်ရမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်း၏ အဆုံးသတ်ရလာဒ်အတွက် အလုံးစုံတာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အောင်မြင်သည့် စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို ရရှိစေမည့် အချက်ပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း အောက်ပါ အချက်(၄)ချက်သည် မျှော်မှန်းထားသည့် ရလာဒ်ရရှိရန်အတွက် အရေးပါလှသည့် အချက်များဖြစ်ပါသည်။
၁။ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို သိအောင်လုပ်ပါ
မိမိရဲ့လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို သိရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အဓိကကျသည့် အကျိုးရလာဒ်များ ရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်အားလုံးအတွက် နက်ရှိုင်းသည့် အကြားအမြင် ဗဟုသုတရှိခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်နည်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းအဆင့်များကို အပေါ်စီးမှ ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်သည့် အသိအမြင်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအဆင့်များသည် သိသာထင်ရှားသည့် အကျိုးရလာဒ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လုပ်ငန်အဆင့်များသည် မိမိထုတ်လုပ်မည့် ထုတ်ကုန်ကြီးတစ်ခုလုံး၏ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် တူပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်များ အပေါ် သင့်ရဲ့ တာဝန်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။ ဥပမာ- သတ်မှတ်အတည်ပြုထားသည့် ပုံစံများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ အစီရင်ခံတင်ပြရခြင်း။
၂။ အခက်အခဲ/ အတားအဆီးများကို သိအောင်လုပ်ပါ
အခက်အခဲ/အတားအဆီးများသည် သင် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ်ကာလအတွင်း ဖြေရှင်း ကိုင်တွယ်ရဖွယ်ရှိသည့် ဆုတ်ယုတ်စေမှုများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိလာမည့် အခက်အခဲ/ အတားအဆီးများနှင့် ကြိုတင် အကောင်အထည်ဖော် ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းဗျူဟာများကို မိမိကိုယ်စားပြုထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများထံ ချပြဆွေးနွေးခြင်းသည် အလွန်အရေးပါလှပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိမနေသည့် ဖြစ်စဉ်များအတွက် သင် မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်မည်ကို ကြိုတင်တွေးတောထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့အား ပြသခွင့် ရနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၃။ မိမိရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေကိုသိအောင်လုပ်ပါ
မိမိရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိတွင်ဘတ်ဂျက် မည်မျှ ရှိသည်နှင့် မည်မျှ သုံးစွဲခဲ့ပြီးပြီဆိုသည်ကို သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်များသည် စီမံကိန်းတစ်လျှောက် တသတ်မတ်တည်း အညီအမျှ ကုန်ကျလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ- စီမံကိန်း အစပိုင်းတွင် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရသည့်အတွက် အသုံးစရိတ်များနိုင်ပြီး စီမံကိန်း ပြီးဆုံးခါနီးတွင် တဖြည်းဖြည်း နည်းသွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် စီမံကိန်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုစီအတွက် ခန့်မှန်းကုန်စရိတ်များ ခန့်မှန်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးစရိတ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်များ၊ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု အချိန်အလိုက်ဇယားတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရပါမည်။
၄။ မိမိရဲ့လူများကို သိအောင်လုပ်ပါ
လူများသည် စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိက အကျဆုံးအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာတစ်ဦးအနေဖြင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန် တာဝန်ရှိပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန် သင့်အနေဖြင့် တာဝန်မရှိပါကလည်း ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအား အတူတကွ ပေါင်းစည်း၍ ကောင်းမွန်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သော၊ ကောင်းမွန်စွာ စီမံကိန်းရေးဆွဲနိုင်သော၊ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သော အစုအဖွဲ့ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရပါလိမ့်မည်။ သင်၏ အစုအဖွဲ့အတွင်း တင်မာမှုများနှင့် သဟဇာတမဖြစ်မှုများလည်း မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းရန်တာဝန်ရှိပါမည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့သားတစ်ဦးစီ၏ မတူညီသည့် အရည်အချင်များနှင့် စီမံကိန်းအပြီးသတ် ရလာဒ်ထွက်ပေါ်လာစေရန် အဖွဲ့သားများ၏ အားထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကိုလည်း သင့်အနေဖြင့် တန်ဖိုးထားတတ်ရပါမည်။
အောင်မြင်သည့် စီမံကိန်းမန်နေဂျာတစ်ဦး ဖြစ်စေမည့် သော့ချက်သည် မိမိကိုယ်စားပြုထားသည့် အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းကို သိခြင်း၊ ၎င်း၏ အခက်အခဲ/အတားအဆီးများ အကြောင်း သိခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးအား လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းနှင့် မိမိအဖွဲ့သားများအကြောင်း သိခြင်း စသည့် သိခြင်းများအား ပေါင်စပ်ထားသည့် ပေါင်းစပ်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ မတူညီသည့် ကျွမ်းကျင်မှုများအကြား အလိုက်သင့် ချိန်သားကိုက် ဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် လွယ်ကူလှသည့် အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း ဤဝိသေသကပင် အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့် ရာထူးတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
Floor Verbeek သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလလိက အပါအဝင် အကျိုးအမြတ် မမျှော်မှန်းသော ပရဟိတကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုများကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ အသီးအပွင့်များကို ရရှိရန်အတွက် မိမိ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံခံယူချက်ကောင်းရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟု သူမအနေဖြင့် ယုံကြည်ထားသည်။
စီမံကိနျး မနျနဂြောတဈဦးအဖွဈ တဈနတေ့ာ
သငျ့အနဖွေငျ့ အကြိုးအမွတျ မမြှျောမှနျးတဲ့ ပရဟိတလုပျငနျးတဈခုမှာ ပါဝငျလုပျကိုငျရနျ၊ အစိုးရထံမှာ အမှုထမျးရနျ၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုမှာ ဦးစီးဆောငျရှကျရနျ စိတျပါဝငျစားပါသလား။ စီမံကိနျးမနျနဂြောတဈယောကျဟာ ဖျောပွပါ လုပျငနျးအသီးသီမှာ အရေးပါလှတဲ့အတှကျ သငျ့ အငျတာဗြူးနဲ့ လုပျငနျးခှငျအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျနိုငျစရေနျ၊ မွနျမာနိုငျငံမှာ အခွစေိုကျပွီးလုပျငနျးဆောငျရှကျနတေဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျတှရေဲ့ နစေ့ဉျဘဝတှကေို ခဏတာမြှျောကွညျ့ခှငျ့ရနိုငျမယျ့“နစေ့ဉျဘဝထဲမှ တဈနတေ့ာ” ဆိုတဲ့ စီးရီးကို Wynee က စီစဉျထားပါသညျ။ Waynee အနနေဲ့ အာရှဖောငျဒေးရှငျး(ရနျကုနျ) မှ အကွီးတနျး အကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ Floor Verbeek ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝထဲက တဈနတေ့ာကို အောကျမှာ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
စီမံကိနျးမနျနဂြော တဈယောကျအနနေဲ့ အမြားပွညျသူကဏ်ဍတှငျ လုပျကိုငျသညျဖွဈစေ၊ ပုဂ်ဂလိက ကဏ်ဍတှငျ လုပျကိုငျသညျဖွဈစေ၊ သို့မဟုတျ အကြိုးအမွတျ မမြှျောမှနျးသညျ့ ပရဟိတကဏ်ဍတှငျ လုပျကိုငျသညျဖွဈစေ တူညီသညျ့အခကျြမှာ- ၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံသူ၊ အစိုးရဌာန၊ အလှူရှငျ၊ သို့မဟုတျ အခွား စိတျပါဝငျစားသညျ့ အစုအဖှဲ့ တို့ကဲ့သို့သော အဖှဲ့အစညျး/ လူပုဂ်ဂိုလျမြားကို ကိုယျစားပွုဆောငျရှကျရခွငျးဖွဈပွီး စီမံကိနျးမြားကို မိမိတို့ကိုယျစားပွုထားသော အဖှဲ့အစညျး/လူပုဂ်ဂိုလျမြား သဘောတူ အတညျပွုထားသညျ့ အခြိနျအကနျ့အသတျ၊ ကုနျကစြရိတျ၊ အရညျအသှေး၊ စိတျတိုငျးကမြှုတို့နှငျ့ စသညျ အခကျြမြားအတိုငျး ကိုကျညီမှုရရှိစရေနျ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျပေးရခွငျးဖွဈသညျ။ စီမံကိနျးမနျနဂြောအနဖွေငျ့ စီမံကိနျး၏လှုပျရှားဆောငျရှကျမြားတှငျ တိုကျရိုကျ ပါဝငျပတျသကျရမညျ မဟုတျသျောလညျး စီမံကိနျး၏ အဆုံးသတျရလာဒျအတှကျ အလုံးစုံတာဝနျခံရမညျဖွဈသညျ။
အောငျမွငျသညျ့ စီမံကိနျး စီမံခနျ့ခှဲမှုကို ရရှိစမေညျ့ အခကျြပေါငျးမြားစှာရှိသျောလညျး အောကျပါ အခကျြ(၄)ခကျြသညျ မြှျောမှနျးထားသညျ့ ရလာဒျရရှိရနျအတှကျ အရေးပါလှသညျ့ အခကျြမြားဖွဈပါသညျ။
၁။ မိမိရဲ့ လုပျငနျးအဆငျ့ဆငျ့ကို သိအောငျလုပျပါ
မိမိရဲ့လုပျငနျးအဆငျ့ဆငျ့ကို သိရှိခွငျးဆိုသညျမှာ အဓိကကသြညျ့ အကြိုးရလာဒျမြား ရရှိနိုငျရနျ လိုအပျသော လုပျဆောငျရမညျ့ အဆငျ့အားလုံးအတှကျ နကျရှိုငျးသညျ့ အကွားအမွငျ ဗဟုသုတရှိခွငျးကို ဆိုလိုခွငျးဖွဈပွီး တဈနညျးအားဖွငျ့ လုပျငနျးအဆငျ့မြားကို အပျေါစီးမှ ခွုံငုံသုံးသပျနိုငျသညျ့ အသိအမွငျရှိခွငျးပငျဖွဈပါသညျ။ လုပျငနျးအဆငျ့မြားသညျ သိသာထငျရှားသညျ့ အကြိုးရလာဒျမြား ဖွဈနိုငျသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ လုပျငနျအဆငျ့မြားသညျ မိမိထုတျလုပျမညျ့ ထုတျကုနျကွီးတဈခုလုံး၏ သီးခွားအစိတျအပိုငျးမြားနှငျ့ တူပါသညျ။ သို့သျော ၎င်းငျးတို့သညျ ပိုမိုကယျြပွနျ့သညျ့ ကိုယျစားပွု အဖှဲ့အစညျး/လူပုဂ်ဂိုလျမြား အပျေါ သငျ့ရဲ့ တာဝနျခံမှုနှငျ့ ပတျသကျဆကျနှယျမှုရှိပါသညျ။ ဥပမာ- သတျမှတျအတညျပွုထားသညျ့ ပုံစံမြားနှငျ့အညီ လုပျငနျးအဆငျ့ဆငျ့ ဆောငျရှကျပွီးစီးမှုအခွအေနေ အစီရငျခံတငျပွရခွငျး။
၂။ အခကျအခဲ/ အတားအဆီးမြားကို သိအောငျလုပျပါ
အခကျအခဲ/အတားအဆီးမြားသညျ သငျ စီမံကိနျး အကောငျအထညျဖျောနစေဉျကာလအတှငျး ဖွရှေငျး ကိုငျတှယျရဖှယျရှိသညျ့ ဆုတျယုတျစမှေုမြားပငျဖွဈပါသညျ။ ဖွဈနိုငျဖှယျရှိလာမညျ့ အခကျအခဲ/ အတားအဆီးမြားနှငျ့ ကွိုတငျ အကောငျအထညျဖျော ဖွရှေငျးနိုငျမညျ့ နညျးဗြူဟာမြားကို မိမိကိုယျစားပွုထားသော လူပုဂ်ဂိုလျ/အဖှဲ့အစညျးမြားထံ ခပြွဆှေးနှေးခွငျးသညျ အလှနျအရေးပါလှပါသညျ၊ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော သငျ၏ ထိနျးခြုပျမှုအောကျတှငျ ရှိမနသေညျ့ ဖွဈစဉျမြားအတှကျ သငျ မညျကဲ့သို့ ဖွရှေငျးလုပျဆောငျမညျကို ကွိုတငျတှေးတောထားပွီး ဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးတို့အား ပွသခှငျ့ ရနိုငျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၃။ မိမိရဲ့ ဘဏ်ဍာရေး အခွအေနကေိုသိအောငျလုပျပါ
မိမိရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနကေို လှမျးမိုးနိုငျခွငျးဆိုသညျမှာ မိမိတှငျဘတျဂကျြ မညျမြှ ရှိသညျနှငျ့ မညျမြှ သုံးစှဲခဲ့ပွီးပွီဆိုသညျကို သိရှိခွငျးဖွဈသညျ။ ကုနျကစြရိတျမြားသညျ စီမံကိနျးတဈလြှောကျ တသတျမတျတညျး အညီအမြှ ကုနျကလြိမျ့မညျ မဟုတျပါ။ ဥပမာ- စီမံကိနျး အစပိုငျးတှငျ လိုအပျသညျ့ပစ်စညျးမြား ဝယျယူရသညျ့အတှကျ အသုံးစရိတျမြားနိုငျပွီး စီမံကိနျး ပွီးဆုံးခါနီးတှငျ တဖွညျးဖွညျး နညျးသှားနိုငျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သငျ့အနဖွေငျ့ စီမံကိနျး လှုပျရှားဆောငျရှကျမှုတဈခုစီအတှကျ ခနျ့မှနျးကုနျစရိတျမြား ခနျ့မှနျးထားရမညျဖွဈပွီး အသုံးစရိတျမြားကို စီမံကိနျးလုပျငနျးအဆငျ့မြား၊ စီမံကိနျးတဈခုလုံး၏ အကောငျအထညျဖျောဆောငျမှု အခြိနျအလိုကျဇယားတို့နှငျ့ ခြိတျဆကျပေးရပါမညျ။
၄။ မိမိရဲ့လူမြားကို သိအောငျလုပျပါ
လူမြားသညျ စီမံကိနျးအောငျမွငျမှုရဲ့ အဓိက အကဆြုံးအခကျြပငျဖွဈသညျ။ စီမံကိနျးမနျနဂြောတဈဦးအနဖွေငျ့ စီမံကိနျးဝနျထမျးမြား ရှေးခယျြခနျ့အပျရနျ တာဝနျရှိပါလိမျ့မညျ။ အကယျ၍ စီမံကိနျးအဖှဲ့ဖှဲ့စညျးရနျ သငျ့အနဖွေငျ့ တာဝနျမရှိပါကလညျး ဝနျထမျးတဈဦးခငျြးစီအား အတူတကှ ပေါငျးစညျး၍ ကောငျးမှနျစှာ တာဝနျထမျးဆောငျနိုငျသော၊ ကောငျးမှနျစှာ စီမံကိနျးရေးဆှဲနိုငျသော၊ ကောငျးမှနျစှာ ဆကျသှယျဆောငျရှကျနိုငျသော အစုအဖှဲ့ကောငျးတဈခု ဖွဈလာစရေေး ပွုပွငျပွောငျးလဲပေးရပါလိမျ့မညျ။ သငျ၏ အစုအဖှဲ့အတှငျး တငျမာမှုမြားနှငျ့ သဟဇာတမဖွဈမှုမြားလညျး မလှဲမသှေ ကွုံတှရေ့လိမျ့မညျဖွဈပွီး သငျ့အနဖွေငျ့ အဆိုပါ ကိစ်စရပျမြားကို ရှငျးလငျးရနျတာဝနျရှိပါမညျ။ ထို့အပွငျ အဖှဲ့သားတဈဦးစီ၏ မတူညီသညျ့ အရညျအခငျြမြားနှငျ့ စီမံကိနျးအပွီးသတျ ရလာဒျထှကျပျေါလာစရေနျ အဖှဲ့သားမြား၏ အားထုတျဆောငျရှကျခဲ့မှုမြားကိုလညျး သငျ့အနဖွေငျ့ တနျဖိုးထားတတျရပါမညျ။
အောငျမွငျသညျ့ စီမံကိနျးမနျနဂြောတဈဦး ဖွဈစမေညျ့ သော့ခကျြသညျ မိမိကိုယျစားပွုထားသညျ့ အဖှဲ့အစညျး/လူပုဂ်ဂိုလျ၏ လိုအပျခကျြနှငျ့ မြှျောမှနျးခကျြမြားကို အကောငျအထညျဖျောပေးနိုငျရနျအတှကျ စီမံကိနျးအကွောငျးကို သိခွငျး၊ ၎င်းငျး၏ အခကျအခဲ/အတားအဆီးမြား အကွောငျး သိခွငျး၊ ဘဏ်ဍာရေးအား လှမျးမိုးနိုငျခွငျးနှငျ့ မိမိအဖှဲ့သားမြားအကွောငျး သိခွငျး စသညျ့ သိခွငျးမြားအား ပေါငျစပျထားသညျ့ ပေါငျးစပျမှုပငျဖွဈပါသညျ။ ဤကဲ့သို့ မတူညီသညျ့ ကြှမျးကငျြမှုမြားအကွား အလိုကျသငျ့ ခြိနျသားကိုကျ ဆောငျရှကျရခွငျးသညျ လှယျကူလှသညျ့ အလုပျတဈခုမဟုတျသျောလညျး ဤဝိသသေကပငျ အလှနျ စိတျလှုပျရှားဖှယျကောငျးသညျ့ ရာထူးတဈခုဖွဈစခွေငျးဖွဈသညျ။
Floor Verbeek သညျ ဖှံ့ဖွိုးရေးလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျနသေူဖွဈပွီး ပုဂ်ဂလလိက အပါအဝငျ အကြိုးအမွတျ မမြှျောမှနျးသော ပရဟိတကဏ်ဍမြားနှငျ့ပတျသကျသညျ့ စီမံကိနျး စီမံခနျ့ခှဲမှုမြားကို ဆယျစုနှဈတဈခုကွာ လုပျဆောငျခဲ့သူဖွဈသညျ။ ရရှေညျဖှံ့ဖွိုးမှု၏ အသီးအပှငျ့မြားကို ရရှိရနျအတှကျ မိမိ လုပျငနျးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ အခွခေံခံယူခကျြကောငျးရှိရနျ မရှိမဖွဈလိုအပျသညျဟု သူမအနဖွေငျ့ ယုံကွညျထားသညျ။
Are you interested in runninganon-profit, working in government or drivingabusiness? A project manager is key to each of these, and Wynee’s “A Day in the Life” series providesaglimpse into the daily lives of real Myanmar-based professionals so that you can be better prepared for interviews and life on the job. Wynee provides belowaday in the life of Floor Verbeek,aSenior Advisor at The Asia Foundation in Yangon.
Whether they work in the public, private, or non-profit sectors, project managers have one thing in common: They representaclient, who may be an investor, government department, donor, or other interested party, and have to make sure that the agreed upon project is implemented as agreed with this client in terms of timeframe, cost, quality, and satisfaction. A project manager is rarely directly involved in project activities, but carries the overall responsibility for producing the end result.
While there are many aspects to successful project management, the following four key elements are of essence to achieving the desired outcomes:
Knowing milestones means having in-depth knowledge of all the steps needed to achieve key deliverables on specifically identified dates, that is: keeping the helicopter view. Milestones may be tangible deliverables, for example specific parts ofalarger product you are manufacturing. However, they can also relate to the wider responsibilities to your client, for example submission ofaprogress report according to an agreed upon format.
Risks are possible setbacks you may encounter during project implementation that may impact achieving your milestones. Mapping out potential risks and strategies prior to project implementation and discussing them with your client is essential, as it demonstrates you are aware of events that are out of your control and have thought about how to mitigate them.
Being on top of your finances means you know how much budget you have and how much money you have spent. Costs are not incurred evenly throughout your project timeline. For example, you may have very high expenses at project start because you need to buy materials and less cost towards the project end. Therefore, you related the projected cost for each project activity, and connect expenses to project milestones and the overall project implementation timeline.
People are arguably the most import factor for your project’s success. Asaproject manager, you are likely responsible for the recruitment of project staff. If you are not responsible for team building, you will still need to make sure individual employees transform intoawell-oiled team that works, plans, and communicates well together. Know everyone’s individual strengths and weaknesses. You will undoubtedly encounter tensions and conflict within your team, but it is your responsibility to manage these, and make sure each team member is valued for their own unique qualities and contributions to the overall outcome of the project.
The key toasuccessful project manager isacombination of knowing the project and its risks, staying on top of finances, and knowing team members to deliver results to your client’s needs and expectations. Being able to juggle these soft and hard skills is not always easy, but it is what makes for an extremely exciting job!
Floor Verbeek isadevelopment professional who has worked in project management in the private and non-profit sectors for overadecade. She strongly believesabusiness mindset is necessary to achieve sustainable development impact.